उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण दूषित पानी पिउन बाध्य
राजविराज- सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–६ वीरेन्द्र बजारको खानेपानी योजना पुरा हुन सकेको छैन ।
जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीले रु छ करोड खर्च गरेपनि सो योजनाको काम अधुरै रहेको स्थानीयवासी बृजमान तामाङले बताउनभयो । उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलोमतोमा बजेट दुरुपयोग गरी खानेपानी योजनाको काम अधुरै छाड्दा स्थानीयवासी शुद्ध पानी पिउनबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण गुणस्तरीय काम नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । प्लाष्टिक पाइप बेलाबेलामा फुट्ने गरेको छ । पानी नछानिकनै धारामा वितरण गर्ने गरिएको छ । स्थानीयवासी दूषित पानी खान बाध्य छन् ।
उपभोक्ताले रु एक हजार ५०० धरौटी तिरेर धारा जडान गरेका हुन् । उनीहरुले मासिक रु २०० शुल्क उपभोक्ता समितिलाई बुझाउँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष लालबहादुर तामाङले सो योजनाको आयव्यवबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
गान्धारीको दृष्टि पर्दा कालो भएको थियो युधिष्ठिरको नङ, महाभारतको एक प्रसंग
राम्ररी पाकेको केरा खाँदाका फाइदाहरू
गोर्खाको 'नेपालीपन गोर्खाली मन' क्याम्पेनले पायो एमओएमद्वारा सराहना
‘राइनो ५०० डी’ले सम्पन्न गर्‍यो निर्माणकर्मी सम्मेलन
'खल्ती' डिजिटल वालेटले पायो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति
नेपालमा डिजिटल ठेगाना प्रणालीको शुभारम्भ
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान साढे २७ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा बढी काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान साढे २७ प्रतिशत रहने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ ...
सगरमथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको ‘इन्स्योरेन्स डिजिटल’ सेवा शुरू
प्रताप पौडेललाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा नेतृत्व अवार्ड
भरतपुरमा एक साता दैनिक ५ घण्टा विद्युत् कटौती हुने
आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ८१ प्रतिशत
कांग्रेसको रिसले मदन भण्डारीको क्षेत्रमा बजेट काटियो : सांसद मिनेन्द्र रिजाल पूरा पढ्नुहोस
‘जनताले चाहेको लोकतन्त्र आउन अझै बाँकी छ’ पूरा पढ्नुहोस
सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो अवस्था : अब त कारण खोज्ने कि ?
शाहीतन्त्र मसानघाटमा, गणतन्त्रमै जनतामाथि धोका !
सिंहदरबारको ढोका जनताका लागि अझै खुलेन !